Riffle: Nweta Chrome Chrome a ngwa mgbakwunye ugbu a! | Martech Zone
Naanị m dere banyere mmekọrịta ịhụnanya m na Twitter na ịkekọrịta di na nwunye nnukwu ngwaọrụ ijikwa ndị na-eso ụzọ Twitter gị. Nke a bụ ngwaọrụ ọzọ mara mma nke m chọpụtara ugbu a!
Riffle nke CrowdRiff bụ a Ihe mgbakwunye Chrome na-agbakwunye pane dashboard Twitter nke ahụ na-enyere gị aka ịchọpụta ma nyochaa ozi na onye ọrụ Twitter.
Riffle na-enye ozi gụnyere ọrụ, ntinye aka nke akaụntụ ahụ, isi iyi nke tweets yana aha ha na mmekọrịta ha. Ọ bụrụ na ị na-etinye n'ọrụ Hootsuite, na Riffle nke CrowdRiff makaHootsuite ngwa bụ ezigbo mma fantastic na-agbakwunye njikọ na onye ọrụ ọ bụla iji nweta ụfọdụ ozi na akaụntụ:
YanaHootsuite, Riffle na-agbakwunye uru iji Twitter saịtị, Tweetdeck, Twilert, ExactTarget SocialEngage, Spredfast, Igwe mmiri, Ọgba aghara, SocialFlow, Salesforce oche, AhịaMeSuite, Kwuo, Ntị, Lithium, Akpa mkpọchi na Zendesk.
Tags: Ntịchrome ngwa mgbakwunyeigwe mmadụEzigbo ihe eji eme obodoGoogle chromegoogle chrome ngwa mgbakwunyehootsuitelithiumAhịaMeSuitebanyeremgbawaSalesforce ochemkpọtụndabaỌgba agharaUdogwuifesaTweetdeckUgboro abụọtwitter chrome ngwa mgbakwunyedashboard twitterpane twitterOnyebuchi
Abụọ Ga-enwerịrị Ngwa Twitter maka Ijikwa Ndị Na-eso ụzọ